Driver | Thiri Cosmetic Co., Ltd. ﻿
10.7.2018, Full time , Service
•	အရက် ၊ ကွမ်းမသောက်စားသူဖြစ်ရမည်။
•	(အသက် 25 မှ 35 နှစ်အတွင်း)ဖြစ်ရမည်။
•	အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင် နှင့်အထက်ရှိရမည်။
•	၁၀ ပေ ၊ ၁၄ ပေ Canter ကားမောင်းနိုင်သူ။
Work location 12/14, Latha St., Lower Block,Latha,Yangon.
Job posted: 10/7/2018
9 Days, Full time , Service
•	ရုပ်ရည်ချောမောလှပပြီး သွက်လက်ချက်ချာသူ ဖြစ်ရမည်။
• Run diagnostic programs to resolve problems. • Resolve technical problems with Local Area Networks (LAN), Wide Area Networks (WAN), and other systems. • Maintaining and repairing technological equipment (e.g. routers) or peripheral devices . • Installing well-functioning LAN/WAN and other networks and manage components (servers, IPs etc.) • Install computer peripherals for users.
• Strong communication skill, negotiation skill and good personality
•	ဘဏ်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး သွားလာနိူင်ရမည်။ •	ငွေစာရင်း အ၀င်အထွက်များ စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်နိူင်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရမည်။
•	Store လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်
•	ရုံးကိစ္စ နှင့် ပက်သတ်သော အစိုးရ ဌာန အသီးသီးသို့ သွားနိုင်ရမည်။ •	Company Product နှင့်ပက်သတ်သော FDA လျှောက်ထားခြင်းကိစ္စများပြုလုပ်နီုင်ရမည်။ •	သွင်းကုန်လျှောက်ထားခြင်း၊ နိုင်ငံခြားငွေလွှဲခြင်းကိစ္စများလည်� ...
•	Strong communication and presentation skill. •	Goal oriented, Flexible and creative under pressure. •	Must be eager to learn about current marketing trends and stay up to date on technology and multimedia platform. •	Must be able to plan and execute marketing plans. •	Strong leadership skills as well as strong motivation skill. •	Must be able to collaborate with other departments in the organization. •	Must haveastrong understanding in the concepts of distribution channels and how distribution works.
17 Days, Full time , Service
18 Days, Full time , Service
•	Stock စစ်ဆေးရန် ခရီးသွားလာနိူင်ရမည်။ •	Stock, Company နှင် သက်ဆိုင်သော စာရင်းများ စစ်ဆေးနိူင်ရမည်။
32 Days, Full time , Service
•	ပြောဆိုဆက်ဆံမှု ပြေပြစ်ပြီး ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	ကုမ္ပဏီနှင့် ရည်ရှည်လက်တွဲကာ အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ •	အရောင်းအတွေ့အကြုံရှိသူများ ဦးစားပေးမည်။ •	အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်း လေ� ...
•	ရုပ်ရည်ချောမောလှပပြီး သွက်လက်ချက်ချာသူ ဖြစ်ရမည်။ •	တာမွေမြို့နယ်နှင့်နီးသူ ဦးစားပေးမည်။
•	အရောင်းနှင့်ပက်သက်သော လမ်းကြောင်းများ ၊ Plan များရေးဆွဲနိုင်ရမည်။ •	ကားမောင်းခြင်းဆိုင်ရာ Traffic နှင့် ဆိုင်ရာများကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ 1 နှစ်ရှိရမည်။ (FMCG Field)
• Strong leadership Skill,Negotiation Skill & Supervision skill. • Able to do the working plan and report to Department Head. • Can be travel if necessary. • Can under pressure.
177 Days, Full time , Service
178 Days, Full time , Service
• Strong communication skill, Leadership skill and good personality. • Have the knowledge Computer skill.
•	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး စကားပြောပြေပြစ်ရမည်။ ဖန်တီးတီထွင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။
•	ရိုးသားကြိုးစား၍ လူအများနှင့် ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူ
•	ရိုးသားကြိုးစားí လူအများနှင့် ညှိနိူင်း လုပ်ဆောင်နိူင်သူ၊ မိမိ၏ စွမ်းဆောင်နိူင်မှုအား ယုံကြည်မှုရှိသူဖြစ်ရမည်။
199 Days, Full time , Service
221 Days, Full time , Service
247 Days, Full time , Service
•	လသာမြို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ရမည်။
•	အလှကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းတွင် စိတ်ပါဝင်စားသူ •	ကျန်းမာသန်စွမ်း၍ သွက်လက်တက်ကြွသူ •	ညွှန်ကြားချက်များကို လေးစားစွာ လိုက်နာနိုင်သူ
253 Days, Full time , Service
Driver Driver, Security & Cleaning Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Thiri Cosmetic Co., Ltd Driver, Security & Cleaning jobs Driver, Security & Cleaning jobs Driver Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
ABC Beauty Co.,Ltd. (Bella Cosmetics)
ယာဉ်မောင်း(Driver) M (1)
TA Resources Myanmar Co., Ltd.